Instapaper na-enwere onwe ya na ihe atụ freemium | Gam akporosis
Instapaper na-aghọ n'efu na-agbakwunye ederede na okwu na ndị ọzọ
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ngwa dị iche iche na ngalaba a nke na-anwa ime ka ihe dịrị anyị mfe mgbe anyị ga-echekwa otu edemede maka ịgụ ma emechaa, anyị nwere n'akpa uwe dị ka eze nke gam akporo, sochiri ma eleghị anya Evernote na ọdịdị adịghị anya site na Instapaper, ọ bụ ezie na a ghaghị ịzụta nke ikpeazụ maka euro ole na ole.
Site taa gaa na freemium nlereanya, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta ya n'efu na Storelọ Ahịa Play. Site na inwere onwe ya, o nwere ụdị ndenye aha ejiri tinye atụmatụ ka mma. Mgbe ị na-abanye n'ụdị ọhụrụ ahụ, ọ pụtawo na ụfọdụ mmelite anyị ga-atụle.
1 Kedu ihe bụ Instapaper?
2 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 4.0
3 Kedu maka ndị zụtara ngwa ahụ n'ụbọchị?
4 Ihe ozo: Akpa
Kedu ihe bụ Instapaper?
Instapaper bụ otu n'ime ngwa na-eme n'ụzọ kachasị mfe ịchekwa edemede maka ịgụ ma emechaa, ma ọ bụ n'ịntanetị, n'ịntanetị maọbụ n'oge ọ bụla.
Instapaper maka onyinye Android a echiche kachasị maka mbadamba (ihe iji nwee ekele) na nke ahụ na-eme ka ịgụ ihe na ekwentị mkpanaaka bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ọ na-anọchikwa anya maka nlezianya anya na ngwoolu na-acha ọcha dị ka ndabere na-enweghị agba ndị ọzọ na-eme ụdị ọfụma na agba ojii na-apụta na ederede niile.
Atụmatụ ya dị ịrịba ama bụ nchekwa nke ibe weebụ dị ka ederede na-achọpụta ha maka mbadamba na ekwentị, a na-elekwasị anya na ihe ọ bụla karịa ịgụ na ihe niile ị na-ebudata dị na offline.
Obere atụmatụ ndị ọzọ bụ ọnọdụ abalị na njikwa ihie, mgbanwe ederede dị nha ma ọ bụ nkwụsị akara na oke ma ọ bụ nhazi site na folda.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na mbipute 4.0
Ozi dị ukwuu bụ na ọ na-aghọ n'efu na usoro ndenye aha Enwere m ọbụna mgbe a kwụrụ ya.
Okwu mmalite nke ederede ka okwu
Nkọwapụta Onye Ọrụ na ngalaba ohuru inyocha: mepụta profaịlụ nke gị, kekọrịta akụkọ echekwara ma chọpụta ihe ndị enyi gị na-echekwa
Egwuregwu Instapaper - Nwee atụmatụ ndị ọzọ gụnyere ederede ederede zuru ezu, ndepụta na-enweghị ngwụcha na listi ọkpụkpọ ederede-na-okwu
Odidi nke ederede na okwu ga-ekwe gee ntị isiokwu iji chekwaa oge n'ịgụ ha, ebe ngalaba nchọgharị ọhụrụ na-emepụta ahụmịhe ka mma jikọtara na iyi nke ndị enyi.
Kedu maka ndị zụtara ngwa ahụ n'ụbọchị?
Dị ka ọ na-emekarị na ngwa ọ bụla akwụ ụgwọ na-aga freemium ha na-emekarị ụgwọ ọrụ otuodila. Swiftkey weputara mkpọ nke enwere n'efu maka ndị zụtara ngwa ahụ n'ụbọchị ahụ, dịka Instapaper.
Instapaper na-enye ndị ọrụ zụtara web ahụ otu ọnwa adịchaghị ndenye aha. Ihe nwere ike ịnọgide dị ka obere mana na ọ dịkarịa ala na-enye anyị ohere ịmata ihe ngwa a pụtara na atụmatụ ndị a.
Ihe ozo: Akpa
Mgbe m kwuchara banyere akpa, ekwesịrị m ịkọwa onye ọrụ ahụ na-egwu mmiri ngwa ngwa na ngwa nke ụdị a, ebe ọ bụ na nke a bụ otu n'ime ihe kachasị mma, na ikike nke Instapaper.
Ọ bụrụ na Instapaper na-emeso interface dị ka a ga-asị na ọ bụ akwụkwọ n'onwe ya, n'akpa uwe gaa na agba di iche iche ma nke a apụtaghị na ọ naghị eji nlezianya agwọ ya aesthetics ya. Ngwa a na - agbaso usoro isiokwu nke post-agụ, ịkekọrịta ohere, ịkọwa ahaziri iche ma nwekwaa ndebanye aha.
Na, o nwere mgbakwunye maka Chrome, Safari, Firefox, na Internet Explorer.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Instapaper na-aghọ n'efu na-agbakwunye ederede na okwu na ndị ọzọ
Otu esi echekwa batrị na LG G2 gị, na-eme ka nhọrọ ngwa ngwa ngwa ngwa, dị irè maka ụdị na ụdị niile
4 Ngwa ndị ga - eme ka WhatsApp gị dịkwuo mma